Shirkii Cimilada Paris oo heshiis gaaray – Kasmo Newspaper
Shirkii Cimilada Paris oo heshiis gaaray
Updated - December 12, 2015 6:47 pm GMT
Shirkii Cimilada dunida ee magaalada Paris muddo dhowr toddobaad ah uga socdey dalalka dunida ayaa soo gabagaboobay, waxaana lagu gaaray heshiis ku saabsan sidii loo xkamaeyn lahaa cimilada sii kululaanaysa ee dunida.
Ergooyin ka qaybgalay shirka, kana kala socdey in ka badan 190 dal, qaar hodan ah iyo kuwo sabool ahba, waxaa dood iyo gorgortan waqti badan socdey ka dib la isla oggolaaday qoraalkii lagu heshiiyey, oo la doonayo in waddamadu wada saxiixaan si uu u nodo heshiis caalami ah oo dal walba laga rabo in uu dhaqan-galiyo.
Heshiiska waxaa ka mid ah in dalalka horumarsan ay kuwa saboolka ah ku taageeraan sannadkii 100 billion oo Doollar si ay uga qaybqaataan xakameynta iyo hoos u dhigga cimilada sii kululaanaysa ee dunida.
Qodobada lagu heshiiyay waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo sidii kuleylka sii kordhaya ee dunida celcelis ahaan loogu hayn lahaa wax ka hooseysa laba darajo cabirka Celsius-ka.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa ku booriyay dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ee shirkaasi ku suggan inay ansixiyaan heshiiskan qabya qoraalka ah si uu u noqdo mid dhaqan-gal ah.
Wuxuu yiri “Aan dhameystirno howsha, dunida oo dhan wey na daawaneysaa”
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande oo uu dalkiisu martigelinayay kulankan ayaa u sheegay ergada in wax ka qabashada cimilada dunidan uu yahay go’aan gacantooda ku jira.
Yoolka la higsanayo waa in guul laga gaaro dadaalkan ka hor sannadka 2025-ka.